पछिल्लो २४ घण्टामा कहाँ कहाँ थपिए संक्रमित? | पहिलो बोली
पछिल्लो २४ घण्टामा कहाँ कहाँ थपिए संक्रमित?
४६२७ पटक पढिएको
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै नेपालमा ३ सय २३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शनिबार प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नेपालमा ३२३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको जानकारी दिएका हुन् । देवकोटाका अनुसार भेटिएका कुल संक्रमितमध्ये ३७ जना महिला रहेका छन् भने बाँकी पुरुष रहेका छन् ।
देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका कोभिड १९ परिक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप ३ सय २३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मोरङका २ र सुनसरीका ४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। यस्तै, कोशी अस्पतलाको प्रयोगशालामा सप्तरीका एक जनाको पोजेटिभ आएको छ।
भरतपुर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा नवलपरासीका ३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका १२ र बर्दियाका २८ जनामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको कास्कीका ३ जना, स्याङ्जाका १० जना, बाग्लुङका १ जनामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
यस्तै धरानस्थित बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशालामा सुनसरीका १ र सप्तरीका ७ जनामा पनि कोरोना पोजेटिभ आएको छ। त्यस्तै, सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा बझाङका ६ जना, कञ्चनपुरका २, अछामका १ जना, कैलालीका २ जना, डडेल्धुराका १ जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा दैलेखका ४३ जना र डोल्पाका १ जनामा पनि कोरोना पोजेटिभ आएको जनाकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
सुर्खेतको प्रयोगशालामा दैलेखका ४, सुर्खेतका १० जना, जाजरकोटका ४ जना, सल्यानका ३८ जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै, रुपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका १, कपिलवस्तु ११, नवलपरासी २, रुपन्देही ३ जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा १२० जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। उनीहरुमध्ये भक्तपुरका १, धनुषा ८, कपिलवस्तु ३९, काठमाडौं ४, महोत्तरीका ३५, रौतहटका ६, सर्लाहीका २७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
थप संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या ३ हजार २ सय ५२ पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण भएकामध्ये ३६५ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण १३ जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। शनिबार मात्रै थप २ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो ।